FAQs | Hangzhou Dro Mucheka Co., Ltd.
Ndingaite nekukurumidza sei kuti ndiwane mutengo?
Isu tinowanzo taura mukati me24hours mushure mekunge takuwana iwe kubvunza.
Pamwe chete, MOQ Yedu inoenderana nemari yako.Stock inogona kugamuchira diki diki.
Unogona kuita dhizaini yedu kana kuisa logo yedu pane chigadzirwa?
Ehe, isu tine yedu yehunyanzvi R & D department, isu tinogona kugadzira yako pachako dhizaini kana kuisa yako logo pane chigadzirwa, ndapota tumira dhizaini yako kana kubvunza kune yedu email (Whatsapp kana Skype) .Uye iwe unogona kutitumira isu masampuli ako.
Ini ndinogona kuwana muyenzaniso?
Muenzaniso ungangoda 5 ~ 15 mazuva ekugadzirwa.
Ukangosarudza yedu iripo sampuro. tinogona kukutumira iwe sampuro zuva rinotevera, tinogona kukutumira yemahara sampuro uye mubhadharo neodhi uchazobhadhariswa, asi waizodzoserwa mushure mekuodha kwenzvimbo.
Ndeipi iyo Minimatt machira ekuendesa nguva?
Izvo zvinhu zvinoda mazuva gumi nemakumi matatu (30-30) ekugadzirwa, zvinoenderana nehuwandu, uye chichava chigadzirwa mushure mekugamuchira dhipoziti
Zvemuenzaniso fizi kana chero diki diki, unogona kuzvitumira kune yedu paypal account.Zve zvakajairwa mirairo, isu tinogamuchira T / T 30% dhipoziti, iyo bhezari inofanira kubhadharwa maererano nekopi yeB / L.
D / P, L / C inogamuchirwawo, asi zvirokwazvo tinosarudza T / T, izvo zviri nyore kwazvo kwatiri tese.
Ndingashanyira fekitari yako kana hofisi?
Chokwadi, gamuchira chero nguva. Tinogona zvakare kuronga kunhonga kuHangzhou Xiaoshan airport uye chiteshi.